Weerar Dhabagal Ah Oo Ciidamada AMISOM Lagula Beegsaday duleedka Magaalada Marka Sh/Hoose.
Tuesday November 21, 2017 - 19:12:19 in Wararka by
Deegaanno katirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxaa lagasoo sheegayaa dagaallo culus oo u dhaxeeya ciidamada Al Shabaab iyo kuwa AMISOM.
Wararka ka imaanaya wadada laamiga ah ee xiriirisa magaalada Marka iyo degmada Afgooye ayaa sheegaya in maanta duhurkii halkaas ay dagaallo culus ka dhaceen.
Dagaallada ayaa yimid kadib markii xoogaga Al Shabaab ay weerar dhabagala ah u dhigeen kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada AMISOM oo ka yimid dhanka Shalaambood kunasii jeeday magaalada Muqdisho.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqlayeen jugta madaafiicda iyo rasaas xooggan oo lays dhaafsanayay, warar lagu kalsoonyahay waxay sheegayaan in dhowr qarax lala beegsaday ciidamada shisheeye kadibna waxaa xigay weeraro fool ka fool ah.
Wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in ciidamada AMISOM ay ku hakadeen deegaanka Ceel-Wareegoow halkaas oo dagaal xooggan ku qabsaday, dagaalkan ayaa imaanaya xilli qarax gaari looga gubay ciidanka Uganda uu maanta ka dhacay duleedka magaalada Baraawe.